Noma yimuphi lithathelwe ifilimu amanoveli kuyingozi ngoba nezingozi kokuba kubi kunokwakuqala amabhuku ahlale izilaleli uqondwa. Kodwa kukhona abaqondisi ngubani ngokuphawulekayo abhekana ngayo inkinga, naphezu kweqiniso lokuthi ukusungulwa ekuskrini zothando abalobi besifazane.
Isikrini lithathelwe Romanov Ostin "Pride and Prejudice"
Ngo Umlobi oyiNgisi Dzheyn Ostin kungasiko imisebenzi. Kodwa ngaso sonke isikhathi zidonse ukunaka kwanoma abenzi mafilimu ezivela emhlabeni wonke kuye kwaba amakhulu eminyaka. Ikakhulukazi kumayelana umsebenzi "Pride and Prejudice."
Isikrini lithathelwe Dzheyn Ostin amanoveli - akulona udaba elula. Isebenza eziningi izikhathi ezingokwengqondo nezingokomzwelo, futhi singenalutho ngempela isenzo langempela. Ajwayeleke kunawo wonke futhi aqondwa izethameli yesimanje usebenza lithathelwe "Pride and Prejudice" kuyinto ifilimu Dzho Rayta nge Kiry Naytli.
Uzungu - the mores ngasekupheleni XIX leminyaka. futhi isimiso esiyinkimbinkimbi of ubudlelwano phakathi kwezicukuthwane. Izinhlamvu main (Elizabeth noMnu Darcy) yethulwe okokuqala at ibhola. Nakuba uyabathanda lab 'Fitzwilliam, uyaqhubeka fushane profile, kusukela Lizzie kungokwalabo emndenini ompofu. Lizzie ihlangabezana umngane wakhe nokwedelelwa entsha, ngoba sikholelwa ukuthi kungenzeka elukhuni kakhulu. Abantu abasha kulo lonke ifilimu ayikwazi yokuthola ulimi olulodwa ngenxa ubandlululo abanalo. Kodwa ekugcineni konke iphela umshado uMnu Darcy futhi Elizabeth Bennet.
Isithombe Dzho Rayta ngokuphindaphindiwe oqokiwe for the "Oscar", "Golden Globe" kanye BAFTA, kodwa wathola kuphela umklomelo yakamuva yimpumelelo DEBUT directorial.
Isikrini lithathelwe amanoveli Ustinova: "Ngaso sonke isikhathi uthi njalo"
Tatyana Ustinova waqala ngokubhala umsebenzi wakhe ngo-2000. umphenyi nemisebenzi melodramatic. Isikrini lithathelwe amanoveli Ustinova - eningi TV. Ngokuphindaphindiwe ogawuthola ezihlukahlukene TV ekhiqizwa esekelwe imisebenzi umbhali: sikhuluma ifilimu "UNkulunkulukazi kwesikhathi eyinhloko", "isehlukaniso futhi igama likamama sasekhaya," "Vices futhi abalandeli babo," "Seventh Heaven," etc ...
Kodwa mhlawumbe edume kakhulu ifilimu lithathelwe amanoveli "Tatiana Ustinova" - iphrojekthi TV "Njalo ngithi njalo" uMaria Poroshina. Linani selilonkhe lebantfu labange 9 zonyaka kwakhululwa ifilimu.
Heroine eyinhloko eyibhalela - Olga Gromova, kungazelelwe lapho elahlekelwa ukuphila layo ajwayelekile futhi enembile: umyeni wakhe efa ngezingalo zakhe kukhona izingane ezimbili futhi eziningi izinkinga. Kodwa owesifazane enza yena esandleni, azigcina ekumelaneni wona elithola iholo ngesimo esisha, ukuphila ngempumelelo ngaphezulu.
Anne no Serge Golon: umlando okungenakudanjiswa Angelica
Isikrini lithathelwe amanoveli kuyinto abaqondisi nenzuzo ukuthi ekuqaleni bathola umsebenzi kahle zaklama futhi zakha izindawo impahla. Ngezinye izikhathi abasebenza ngalolu izinto akuyona nje owesifazane, kodwa wonke umndeni umusi, njengoba kwakunjalo nangemaKhristu Anne no Serge Golon: ndawonye baqamba indaba elandiswayo yeqhawe eside ngobuhle, Angelica. Lesi sakamuva, incwadi ka-14 Angelica, yanyatheliswa ngo-2011 ngaphansi kwesihloko esithi "Angelica nombuso waseFrance."
The best screen ezincwadini amanoveli mayelana adventuress enhle imisebenzi Bernard Borderie. Sekukonke, umqondisi esingu imidwebo emihlanu ku amanoveli. Kulezi amafilimu, umbukeli kuthinta yonke into: abadlali ubuhle, obugagu indawo esikuyo, amanani aphezulu izingubo. Nokho, u-Anne Golon yena interview uyavuma ukuthi ayikuthandi Borderies isithombe njengoba umqondisi kakhulu wasuka ngesakhiwo yokuqala kule noveli, nomthofu zesifazane ayikwazanga idlulisele umqondo nokuhlakanipha Heroine yakhe ebukekayo.
Margaret Mitchell futhi "Gone ne-Wind"
Isikrini lithathelwe Margaret eMitchells zothando, iqondiswe Viktorom Flemingom, sekuyisikhathi eside kakhulu ehlelweni elithile. Kuyinto ifilimu ongenakulibaleka "Gone ne-Wind", eyakhishwa ngo-1939 futhi waba ngowokuqala sici sobude umbala imidwebo emhlabeni.
Heroine eyinhloko Romanov Mitchell - Scarlett O'Hara. Ungishiya enhle, enolaka futhi athambekele ezamehlela. Scarlett namanje nenkani kakhulu, ngakho iminyaka eminingi abazingela sase siyindoda engashadile - Eshli Uilksom. Ngemva kokudabula uchungechunge uvivinyo olunzima, ukuhlangana indoda enothando, ukubeletha kanye ulahlekelwe ngumntwana wakhe, Scarlett uyaqhubeka ukuba nethemba ukuphinde sihlangane Ashley. Ekugcineni, leyo ndawo ilahlekelwa ubuhle bayo, futhi lo muntu kuphela wayemthanda ngempela (Rhett Butler) uhamba.
"Gone ne-Wind" Fleming wathola 8 "Oscars", okuyinto Sekuyisikhathi eside kubhekwe umlando ngokuphelele. Futhi Viven Li futhi Klark Geybl yaphenduka ezweni osaziwayo, lapho azi ukuthi kukhona ngisho eSoviet Union.
Sylvia Nasar futhi "A Mind Beautiful"
Sylvia Nasar - Umbhali waseMelika, okwathi ngo-1998 wabhala incwadi mayelana nokuthi kwenzekani Economist Dzhona Forbsa Nash. Kamuva ngo-ukuthuthukiswa indaba wathatha umqondisi Hollywood Ron Howard.
Ukuze Ron sika ifilimu lithathelwe amanoveli - ke ajwayelekile. He is umdali amabhayisikobho ezimbili kusekelwe imisebenzi Dena Brauna: kuba "Da Vinci Code" futhi: "Izingelosi Amademoni." Ngo "Ingqondo Imidlalo," umqondisi indima isihloko waphathisa umlingisi Russell Crowe.
Usizi lokukhulelwa Dzhona Nesha (umlingisi losemcoka) ukuthi akakwazi sezibalo ekhaliphile sezomnotho, kodwa ngesikhathi esifanayo wahlushwa lokuphazamiseka okukhulu kwengqondo: kaNobel njalo wahlushwa ukuhhema, okwagcina wabhubhisa ukuphila kwakhe.
Phakathi ukuqopha umlando obangela ithimba Rona Hovarda ayenakho nje emine "Oscar", kanye nezinye imiklomelo eminingi ehlonishwayo.
Emily Brontë futhi "Wuthering Heights"
Omunye umbhali, ukuze imisebenzi yakhe ekujabulisayo izingqondo cinema - Emily Brontë. inoveli yakhe esihloko sithi "Wuthering Heights," wathwebula njalo enviable. Kukhona inguqulo TV 2009 noTom Hardy, kanye ifilimu ngo-2011, Nokho, inguqulo yakamuva esihluke kakhulu kusukela encwadini: indima Heathcliff wamenywa Afrika American, nakuba esiqintini inoveli umlingiswa oyinhloko ngifane lwamaGypsy (ngokusobala, abadali wanquma ukubuyela kokuqagela lishumi yelubandlululo).
Ngoba konke lokhu izizathu, inguqulo uyakufanelekela kakhulu angabhekwa ngo-1992, lapho indima esemqoka waya Zhyulet Binosh futhi Ralph Fiennes. Umlando, kanye eyabhalwa Brontë, bese ukusungulwa phezu abadlali kwesikrini, abakwazi uthinte izibukeli: abathandi amabili abe abathunjwa of inkanuko nokucwasa umphakathi. Ngeshwa, le ndaba akuyona ngempela enesiphetho esijabulisayo.
Agatha Christie "Ukubulala phezu Orient Express"
Isikrini nguqulo ye zothando - amaphrojekthi ethandwa. Kodwa othakazelisayo kakhulu yiwona amafilimu enziwe umphenyi abanamakhono okusebenza.
Adume Agatha Christie ukwazi konke. Yena wadala izinhlamvu ezifana yisakhiwo sodumo like uNkk Marple futhi Erkyul Puaro. Hollywood umqondisi Sidni Lyumet 1974 nesithakazelo kakhulu ngemisebenzi Christie, ngenxa yalokho, wadala kakhulu umphenyi ifilimu "Ukubulala phezu Orient Express." Lesi sithombe uqokelwe imiklomelo eziyisithupha "Oscar", kodwa wathola kuphela statuette igolide.
Ngokwale ndaba, brilliant Erkyul Puaro wazithola zinhlobo zokuphila zahlukaniswa nezwe endaweni abagibeli olulodwa 12-Express, emuva kokutholakala kwesidumbu nantathu watholakala ekuseni. WaseMelika abulale ngesihluku, uma umphenyi ngeke bakwazi ukuchaza Kulokhu?
Darya Dontsova kanye uchungechunge TV "Dasha Vasileva"
Akunakwenzeka ingasaphathwa omunye umlobi isiRashiya, ogama amanoveli abacebile ngokwezinto ezibonakalayo yamaphrojekthi ithelevishini. Sikhuluma Dare Dontsovoy - umbhali odumile umphenyi labesifazane.
The best ifilimu lithathelwe Romanov Dari Series - uchungechunge "Dasha Vasileva" nge Larissa Udovichenko. Impumelelo, le phrojekthi yayingase ibizwe ngokuthi ngenxa yokuthi ukuthi wakhululwa ingqikithi 52 chungechunge, ngenkathi ezinye amabhayisikobho TV esekelwe imisebenzi umbhali iphela emva 20-30 iziqephu.
Umdlali oyinhloko, ngokuvumelana esiqintini inoveli, ngokungazelelwe uthola inheritance. Ngakho-ke Dasha Vasilyeva eshiya umsebenzi wakhe wokufundisa eyunivesithi, futhi ekugcineni uthola ithuba ukwenza yini ayithandayo - sleuthing. Sledovatelnitsy adventure Umthandi womculo futhi ngokuzinikela ochungechungeni TV.
Dzhoan Rouling futhi Garri Pottere uchungechunge amafilimu
Ama-Movie-ifilimu lithathelwe amanoveli kuletha imali enhle. Kodwa nge uchungechunge ibhokisi ehhovisi mayelana wizadi umfana Harry movie ayikwazi kuqhathaniswa, mhlawumbe, noma iyiphi iphrojekthi eyodwa.
Ngenxa Joanne wadala entsha lwasemaphusheni yonke, lena sekuyindlela abacebe abesifazane abalobi emlandweni embonini sokushicilela.
indaba Miss Rowling ufana inganekwane. Waqala ubhala incwadi mayelana Potter ngemva kwesibhamu engu-30 umyeni wayo elahlekile, umsebenzi kanye kanina. Sekuyisikhathi eside Rowling waphila inzuzo eyodwa nomphakathi. Wathumela umsebenzi wakhe wonke ukushicilela house British, kodwa yasenzela phansi. Uphendule kuphela inkampani encane Bloomsbury. Ngemva kweminyaka emihlanu ngemva kunyatheliswa incwadi yokuqala Harry Potter JK waba multimillionaire.
Amafilimu we "Harry Potter" Ufanelwe ilungelo ukuba isigaba "I lithathelwe engcono amanoveli" okungenani ngoba bonke wenza kinoseriyu imali eningi kakhulu, ehhovisi ibhokisi kuyinto yesibili kuphela franchise "The Avengers." It kuvela ukuthi "Harry Potter" uye indiva ngisho "Pirates zaseCaribbean" futhi bondiane.
Futhi yena Joanne okwamanje azithatha ukuze ngokwayo mbumbulu lowesilisa futhi bathuthela uhlobo umphenyi.
"Shadows at Emini": nabalingisi indima eSoviet omkhulukazi uchungechunge umqondisi V Krasnopolye
Amahlaya Incendiary, abadlali ukuthi unesiphiwo: "Nikeza intsha!" - iphrojekthi kulabo young enhliziyweni
Maria Klimova: Biography, Filmography, umsebenzi waseshashalazini
Iphimbo ezinganeni nakubantu abadala
The best-Cuban cigar brand, ukukala, ukukhiqizwa
Okufanele ukwenze uma inja yenhlwathi umkhaza?
Lokuzaliswa rose nge isibambo oluhlaza - incazelo indlela
Yomiselela radiators ngehhovisi izindlu: nezinqubo. Indlela esikhundleni radiators efulethini?
"Pine iPharadesi" (ikamu) - ukubuyekezwa. Amatende "Pine Paradise" e-Arkhipo-Osipovka (esifundeni saseKrasnodar)